Waa kuma ra’iisul wasaaraha uu Xasan soo xulan doono? - Caasimada Online
Home Warar Waa kuma ra’iisul wasaaraha uu Xasan soo xulan doono?
Muqdisho (Caasimada Online) – Xasan Sheekh Maxamuud waxuu la soo baxay guul la yaab leh isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed oo mar labaad ku guulaysta xilka qaranka.
Dhaqan ahaan, magacaabista ra’iisul wasaaraha waxay dhacdaa caleemasaarka madaxweynaha kaddib, taasoo muujinaysa xil wareejinta. Balse, baraha bulshada ayaa durbadiiba la booday faafinta mala-awaal ah, xilli madaxweynuhu uu wado wadatashi.
Masiibada haysata dalkan iyo Xasan Sheekh-baa waa in dadka aysan kaadsiinyo lahayn. Waxaa laga yaabaa inuu ku dhibtoodo sidii uu u heli lahaa qof u cuntama shuruudaha xafiiskiisu u dejiyay musharraxa, maadaama xilhayntiisii hore uu madax wareer ka qaaday qofka aan karti lahayn amaseba aan lagu sameyn baaritaan xooggan.
Ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in madaxweynuhu doonayo qofka ku habboon shaqada. Soomaaliya waxaa caado ka noqotay in madaxweyneyaashu ay magacaabaan in ka badan hal ra’iisul wasaare muddada xilhayntooda.
Waxaa isa soo taraya doodaha ku saabsan tayada cidda noqon doonta ra’iisul wasaaraha. Si loo soo afjaro mala-awaalka ayaa waxaan eegeynaa cidda ku haboon xilligaan adag jagada.
Sideedaba, musharruxu waa inuu noqdaa qof dowladeed oo daacdnimo iyo kalsooni ku darsaday aragti dheeri uu ku curin karo isbeddel iyo caqli uu ku hagi karo xukuumad daciif ah isagoo aan xafiiska khilaaf u soo jiidin kana soo horjeedsan mudnaanta ololahii doorashada madaxweynaha balse, aan ahayn hayin malafsanaya hantida qaranka.
Run ahaantii madaxweyne Xasan Sheikh waxuu xilhayntiisii hore ku xujoobay xil la wadaagista dad aan layska hubin tayadooda iyo mooshinno aan dhammaanayn oo ka dhashay isqabqabsiga hoggaanka. Khaladka waxuu ka imanayay Dastuurka qabyada ah oo aan kala saareyn awooddaha iyo khilaafka oo suuqa la soo dhigayay!
Si looga fogaado dhaqankaas, waxaa loo badan yahay inuu qofku noqdo “technocrat” khibrad, karti iyo hufnaan leh, fahamsana habraaca baarlamaanka si uu dabada uga riixo dhammaystirka dastuurka.
Qof diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in aysan jirin wax soo jeedin ah oo rasmi ah oo cid loo jeediyay. Balse, ma xumaan lahayn in la tijaabiyo dumar, taasoo noqon doonto horumar casri ah oo uu dalka hore ugu tillaabsan. Xasan Sheekh waxuu taariikh wanaagsan u leeyahay inuu haweenka u dalacsiiyo darajooyin sare.